Mabhegi ekugadzirisa matipi iwe ausingazive - Nhau - Dongguan Yihua Handbag Co, Ltd
Imba > Nhau > Indasitiri Nhau > Matipi ekuchengetedza bhegi iwe ausingazive
Zvinonzi mabhegi mudikani wechipiri wemukadzi, saka tinofanira kubata sei "mudiwa" wedu? Mushure mekutenga bhegi, kunyanya mabhegi anodhura ayo anotengwa nemutengo wepamusoro, zvinonyanya kukosha kuti uzive nzira dzakakodzera dzekuchengetedza. Tikasaibata zvakanaka, inokurumidza kuoma nekudonha, uye ruva racho richarasikirwa neruvara. Nhasi tichataura nezve mamwe matekinoroji uye nzira dzekuchengetedza bhegi.
Mubvunzo: Ndeapi matanho ekudzivirira anofanirwa kuve ekutanga sarudzo yemasaga eganda achangotanga?
Mhinduro: Mushure mekutenga bhegi reganda, usanetseke nekumhanya uchitenderera kumusana kwako. Tinofanirwa "kupfeka rokwe" remabhegi edu ematehwe. Kune mabhegi ematehwe, kunyanya anodhura ekutanga-masheji emombe mabhegi, tinotenga Mushure mezvo, nhurikidzwa ye "dermis coating agent" inofanira kuwedzerwa pairi. Vanhu vazhinji vanogona kunge vasina kunzwa nezvazvo. Izvi zvinowanikwa paTaobao. Muchokwadi, isu tinowanzo kuve nehukama nematehwe ekuputira. Paunotarisira zvigaro zviri mukati memotokari muchitoro cherunako chemota, vatenzi vechitoro cherunako vachapukuta chigaro chemotokari mushure mekuchenesa mota kukwira. ". Mushure mekuwedzera izvi kubhegi, zvakanyatsoenzana nekuwedzera imwe firita yakajeka muhombodo. Nezve izvi, zvinogona kudzivirira guruva netsvina, uye kudzivirira tsvina neguruva kuti risapinda mufibre pores yeganda.
Mubvunzo: Izvo zvirinani kunaka kwehombodo, iyo inowedzera isina mvura?
Mhinduro: Iwo akanakisa emabhegi emhando masaga ematehwe, asi masaga eganda haanyatsoita mvura Zvakajairika mabhegi eganda anowedzerwa nezvinhu zvisina mvura uye zvinodzora mafuta. Kusavhara mvura zvine mwero kwakanaka, asi iwe unofanirwa kuishandisa nekukurumidza mushure mekunyorova. Pukuta yakaoma netauro yakachena (shandisa magirazi jira kana chipanje zviri nani). Kana paine mvura, zviri nyore kuwana moldy. Kazhinji mumazuva ekunaya, kana iwe uchida kufamba, zvakanakisa kutakura mhando ye patent bhegi reganda. Iko kusavhara kwemvura kweganda repatent kunonyatsosimba kupfuura mabhegi akajairwa, nekuti hosi yependi inosaswa pamusoro peganda kana PU, iyo ine mvere uye yakajeka mhedzisiro. , Iyi ndiyo nzira yeganda repatent, iyi pende inogona kunyatsovhara mvura, uye zviri nyore kupukuta zvakachena.
Mubvunzo: Ungagadzirisa sei ivhu rine mafuta iro rakaoma kuchenesa pabhegi?
Mhinduro: Sarudzo yekutanga inoenderana nezvinhu zvehombodo. Kana iri PU, microfiber, PVC, nylon, denim uye mamwe mabhegi asiri eganda, tinogona kushandisa sipo uye sipo, tobva tashandisa tauro rakachena kukwesha. Asi kana iri dehwe chairo, usashandise sipo kana sipo. Kubviswa kweiyo dermis kunoda kushandiswa kwe "dermis yekuchenesa mumiriri", iyo inowanikwa paTaobao. Iyo dermis inofanirwa kucheneswa nehunyanzvi, zvikasadaro inokuvadza kortex.
Mubvunzo: Ko bhegi rinogona kuburitswa kuzuva mushure mekunyorova here?
Mhinduro: Kwete, kunyangwe hazvo chinhu chiri muhombodo iri, iwe unofanirwa kudzivirira kuratidzwa kuzuva. Kana yakanyorova, pukuta netauro rakachena kutanga, wozoshandisa chipanji kuyamwa mvura iri pamusoro pehomwe, woiisa munzvimbo ine mweya kuti uome zvakasikwa. Kana iri dehwe, kuoneswa kuzuva kunokonzeresa kuti ganda riome uye riputse, kunyangwe risiri bhegi reganda, rinozopera kana rakaiswa kuzuva.
Mubvunzo: Chii chandinofanira kuita mushure mekunge bhegi rava kuumbwa?
Mhinduro: Masaga eMoldy anowanzo kukonzerwa nehunyoro. Iwe unofanirwa kugara uchiteerera hunyoro. Kana paine zviratidzo zvehunyoro, tora uende nazvo kunzvimbo inofefeterwa uye rega iome kwenguva. Mushure mekukura kweforoma, sarudzo yekutanga ndeyekunyika chipanje neinosemesa-sipo yekuchenesa zvachose dota kubva munzvimbo dzevhu, wozoiisa munzvimbo ine mweya kuti iome. Mushure mekuomesa, yeuka kupukuta chakuvhe uye antibacterial mumiriri pamusoro pehombodo kunyatso kurapa chakuvhuvhu (pfuti yekumwaya iri nani, unogona kutopfapfaidza pamusoro pehombodo, mutengo wepfuti yepfuti paTaobao iri dzinenge makumi masere yuan). Iyo "anti-fomu yekuchenesa" uye "anti-chakuvhuvhu antibacterial agents" anoshandiswa pano zvakare anodhura kwazvo. Mutengo uri paTaobao unenge makumi emakumi euan bhodhoro, saka unofanirwa kuichengeta kumba. (Pamusoro pezvo, kana iwe usina zvinhu izvi mumba mako, vhiniga inogoneka, asi mhedzisiro yacho haina kunaka sevashandi vekuchenesa.)
Mubvunzo: Ko shangu polish ingashandiswa kuchengetedza mabhegi here?
Mhinduro: Kwete, shangu dzematehwe uye mabhegi zvinhu zviviri zvakasiyana. Iwe haugone kushandisa shangu polish kuchengetedza mabhegi ako kuchengetedza mari. Kana iwe ukashandisa shangu polish kuchengetedza mabhegi ako, mhedzisiro yacho ichave yekupera kwemavara. Uyu ndiwo mhedzisiro yekuedzwa kwangu pachezvangu. Kazhinji, yeuka kuisa hunyanzvi mafuta ekuchengetedza pamabhegi eganda. Rudzi urwu rwehunhu hwakanaka, mutengo weTaobao ungangoita zana yuan bhodhoro, kana iri bhegi remhando yepamusoro raunotenga, kazhinji rangarira kuisa mafuta ekuchengetedza nyanzvi, mushure mezvose, zvinoda mari yakawanda. Usatarise mabhegi awakatenga akawandisa.
Mubvunzo: Bhegi rinofanira kuiswa sei kana risiri kushandiswa?
Mhinduro: Mabhegi asina kurukwa ari kuzoshandiswa pano. Kana munhu wese atenga masaga, vatengesi vanozovapa masaga asina kurukwa. Ini ndinotenda kuti vanhu vazhinji vanorasa izvi marara uye vanofunga kuti hazvina zvazvinoita. Muchokwadi, hazvina kunaka. Ah. Masaga asina kurukwa ane basa rakakosha kwazvo. Isu tinoisa mabhegi mumabhegi asina kurukwa, ayo anogona kutora chinzvimbo mukusapinda guruva, uye zvakare uine mvura-inodzinga uye hunyoro-chiratidzo mabasa. Zvinotonyanya kukosha, kusarukwa Jira iri zvakare rinofema, kuitira kuti kana bhegi reganda rikachengetwa, risave risingapindike sezvariri mupurasitiki uye rinokonzera kuti dehwe reganda reganda riome zvakanyanya uye kukuvara. Kana iri bhegi rakamisikidzwa, unogona kuisa bepa mariri kana risiri kushandiswa (kazhinji, rinowanikwa mubhegi kana iwe ukatenga bhegi rakamisikidzwa, yeuka kuti usarase), unogona kusimudza chimiro chehombodo kuti kudzivirira kubva pakuremara mushure mekusiiwa kwenguva refu. .
Mubvunzo: Zvakakosha here kuti wakisi dehwe kana mabhegi ePU?
Mhinduro: Kazhinji, hazvidiwe. Chinangwa chekuisa wakisi kudzivirira mvura nemafuta. Kana bhegi ragadzirwa, zvinhu zvisina mvura zvinowanzo wedzerwa kumusoro. Waxing haina basa. Mukugadzirisa kwese, zvakaringana kupukuta iyo nzvimbo nehunyanzvi mafuta ekuchengetedza ganda.
Mubvunzo: Chii chandinofanira kuita kana bhegi rakakuvara kana kukuvara?
Mhinduro: Kana bhegi rakakosha reganda rakakuvara, riendese kune nyanzvi yekugadzira ganda shopu kuti uigadzirise munguva Usazvidya moyo nezvazvo pachako, kuti udzivise matambudziko makuru. Panguva ino, iwe unofanirwa kuve ne "kuvhiyiwa" pabhegi. Ipapo ine chitarisiko chitsva. Kazhinji, kana bhegi reganda rakatyoka, hapana chikonzero chekugadzirisa. Kana chekare hachiuyi, chitsva hachiuye, saka ingochinja bhegi.
Tevere:Diki coup rinokudzidzisa iwe kuchengetedza mabhegi kuchengetedza nzvimbo